केशवराज जोशी काठमाडाैं, १३ चैत
मेरी भाउजूले भन्नुभयो– ‘२०७२ को भूकम्पको बेला अधिकांश समय हामी सबै जना घरबाहिर चौरमा थियौँ, तर सँगै थियौँ । अहिले कोरोनाको विश्व्यापी महामारीमा हामी सबै घरभित्रै छौँ । तर, सबै टाढाटाढा छौँ ।’
एकछिन यो कुराले मलाई गम्भीर बनायो । भाउजूको कुरा सोह्रैआना सत्य थियो । साँच्चै एउटै घरभित्र हामी कसरी टाढा भयौँ त ? यसको समाजशास्त्र केहो ? त्यो कुन तत्त्व हो जसले हामीलाई सँगै रहँदा पनि सँगै रहन दिएन ?
अहिले काठमाडौंमा मेरो परिवारका हामी ४ जना छौँ । दाई, भाउजू, ३ वर्षकी छोरी र म । हामी ३ जना ३ कोठामा आआफ्नो अड्डा जमाएर बसेका छौँ । दाइ र म छेउछाउका कोठाहरूमा र भाउजूबीचको कोठामा छोरी आमासँगै ।
३ जनाकै हातमा स्मार्टफोन छ । साथमा वाइफाइ कनेक्सन पनि । हाम्रा आआफ्नै स्वाद छन् । कोही समाचारमा रमाउँछौँ, कोही टिकटकमा तर कोही कुराकानीमा र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूमा ।
जसमा कुनै रियालिटी नभएका तर नाम रियालिटी शो राखिएका कार्यक्रम पनि पर्दछन् । हिजोआज हामी फोनसँगै सुत्छौँ, फोनसँगै उठ्छौँ । धन्न खाना खाने र सुत्ने समय निकाल्न सकेका छौँ, फोनसँगको ब्यस्तताका बाबजुद ।
अब बुढाबूढीका त अलगअलग कोठा हुन्छन् भने अरुको त कुरै छाडौँ । यिनीहरू एउटै कोठामा हुन्थे भने पनि दुईतिर फर्केर मोबाइल चलाउँथे होलान् शायद ।
कार्ल माक्र्सले त्यो समयमै अर्थात् १९औँ शताब्दीमै व्यक्ति एक्लिँदैएक्लिँदै जाने अवस्थाको व्याख्या गरेका थिए, जसलाई ‘एलिनेसन’ भन्ने नाम दिइएको छ
यसको ठ्याक्कै नेपाली अर्थ होला, नहोला तर एक्लोपन अथवा अलगावले यसको भाव वहन गर्छजस्तो लाग्छ । मलाई अलगाव शब्द प्रयोग गर्न मन लाग्छ ।
माक्र्सले त्यो बेलामा पुँजीवादले मजदुर वर्गमा सिर्जना गरेको अलगावको विषयमा चर्चा गरेका थिए । मजदुरहरूले काम गरेबापत केही ज्याला अवश्य पाउँछन्, तर उत्पादन र नाफामा उनीहरूको कुनै किसिमको हिस्सेदारी वा स्वामित्व रहँदैन ।
जबकि मालिकले पुँजी लगानी गर्दछ भने मजदुरले श्रमको लगानी गर्दछ । त्यस्तै, प्रविधिको विकास र श्रमको व्यापक विभाजनले गर्दा कुनै पनि सामान एउटै व्यक्तिले बनाउँदैन र कतिपय अवस्थामा त आफू के बनाउँदै छु भन्ने कुराको जानकारी समेत हुँदैन तर मेसिनले झैँ काम गरिरहनुपर्दछ ।
यी र यस्तै कारणले व्यक्तिमा आफ्नै कामप्रति अलगाव सिर्जना हुन्छ । उत्पादनसँग कामदारको भावना जोडिँदैन । आर्थिक आवश्यकता मात्रै जोडिन्छ । अर्थात् ऊ पैसाका लागि मात्रै काम गर्दछ ।
पैसाका लागि बृहत् उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । सिर्जनशिलता हुँदैन । मेसिनले काम गरिरहेको हुन्छ । मान्छे पनि मेसिनजस्तै बनेका छन् ।
यो त भयो उत्पादन प्रणालीसँग जोडिएको एलिनेसन । आजको दुनियाँमा प्रविधिको विकास र त्यसमा पनि विशेष गरी इन्टरनेटको विकासले एलिनेसनलाई चरममा पु¥याएको छ ।
इन्टरनेटको विकासले विश्वलाई साँघुरो पनि बनाएको छ, जसलाई ग्लोबल भिलेज भनेर चिनिन्छ । यो सबै इन्टरनेटको विकासले नै सम्भव भएको हो ।
कुनै समय नेपालमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको समाचार सुदूरपश्चिमसम्म पुग्न १ वर्ष लाग्थ्यो भने अहिले ७ समुन्द्रपारि डोनाल्ड ट्रम्पले सीएनएनलाई गाली गरेको समाचार एक अमेरिकीले र मैले एकसाथ पढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यो सबै प्रविधिको विकासले सम्भव तुल्याएको हो । तर यसको एउटा अर्को पाटो पनि छ, जसले हामीलाई हाम्रोपनबाट टाढा लैजाँदै छ । त्यसैलाई अलगाव भनिएको हो ।
आजभोलि वल्लोपल्लो कोठामा रहनेहरूबीच पनि भिडियोकलमा बात हुन थालेको छ । म्यासेन्जरमा कुरा हुन थालेको छ । एउटा कोठादेखि अर्को कोठासम्म जाने फुर्सद कसैलाई छैन ।
व्यक्ति–व्यक्तिबीचको यो दूरीलाई कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले समेत कम गर्न सकेन । अहिले आफैँमा रमाउनेहरूको जुन जमात तयार हुँदै छ, त्यसलाई फेरि समाजमा फर्काउन सम्भव होला त ?
समाज र परिवारलाई प्रविधिले जति नजिक ल्याएको छ , त्यत्तिकै दूरी पनि बढाएको छ । अब त सामाजिक सञ्जालहरूमा आउने लाइक र कमेन्टहरूले आफ्ना र पराई निर्धारण गर्ने युगको सुरुवात भएको छ ।
अहिले विश्वमा कुल जनसंख्याको करिब ५९ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ता छन् । जुन संख्या सन् २०११ मा ३३ प्रतिशत थियो ।
त्यस्तै, अहिले विश्वको कुल जनसंख्याको करिब ४५.१२ प्रतिशत अर्थात् ३.५ अर्बसँग स्मार्टफोन छ । विश्वका विकसित देशहरूमा ७०–९० प्रतिशत जनताले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
नेपालमा सन् २०११ मा करिब ९ प्रतिशतले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गर्दथे । सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा करिब ७० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै, सन् २०१३ सम्ममा १५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्मार्टफोन बोक्ने गर्दथे । सन् २०१८ सम्ममा सो अनुपात बढेर ५२ प्रतिशत पुग्यो । र अहिले नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ६२ प्रतिशत नेपालीको हातमा स्मार्टफोन रहेको अनुमान छ ।
प्रविधिको प्रयोगमा आएको यो तीव्र विकासले मानिसहरूलाई नजिक पनि ल्यायो र टाढा पनि हुत्यायो । शायद यही फरक हो २०७२ को भूकम्पको समयमा हामी सबै जना घरबाहिर थियौँ, तर बाहिर भए पनि सबै जना सँगै थियौँ ।
आज कोरोनाको महामारीको बीचमा हामी सबै जना घरभित्रै छौँ तर एउटै घरभित्र पनि टाढाटाढा छौँ । अहिले हामी सबै सँगै छौ । तर, कोही पनि एकसाथ छैनौँ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत १३, २०७६, ११:५१:००